Soo dejisan TuneIn Radio 14.7.13402 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: TuneIn Radio
TuneIn Radio – radio internet oo taageera saldhigyada raadiyaha ka yimid wadamada kala duwan ee dunida ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay baadhaan saldhigyada raadiyaha in qaybsan qaybaha iyo qaybaha kala duwan. TuneIn Radio bixisaa shaandhaynta toos ah gobol oo soo bandhigay liiska laga heli karaa saldhigyada. Software lagu lafaguraa Dooratay muusikada oo user iyo ogaada ah idaacadaha la mid ah oo ay ku sifayn. Sidoo kale TuneIn Radio oo ka kooban guddi gacanta user-friendly oo u suurta galinaya si ay u qoraan, ku xasil ama dib u socon daayey.
Dad badan oo Idaacadaha ka adduunka oo dhan
Qaybinta haboon ee saldhigga by category
Search by erayo iyo odhaaho muhiimka ah
Falanqaynta Dooratay muusikada oo user
Soo dejisan TuneIn Radio
Faallo ku saabsan TuneIn Radio
TuneIn Radio Xirfadaha la xiriira
Qalab waxtar leh oo lagu aqoonsan karo wadooyinka. Barnaamijka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diiwaangeliso fariinta heesaha oo aad aqoonsan kartid magaca heesta, album iyo qoraaga.
Software waxay leedahay helitaanka mid ka mid ah adeegyada music ugu caansan. Codsiga waxaa awood u tahay in la raaco wararka ee adduunka music iyo baadhaan diiwaanka audio kala duwan.
Linkedin – shabakad bulsho ayaa diiradda saareysa mowduuca sameynta xiriirada ganacsiga. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadaha kala duwan ee caalamka iyo wakiiladooda.
Duolingo – waa aalad loogu talo galay barashada raaxada ee luqadaha qalaad iyo horumarinta xirfadaha hadalka. Software-ka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad barato luqado badan oo ay ku jiraan habab waxbarasho oo kala duwan.
Codsiga waxaa la set oo ah qaab ciyaareed xiiso leh ka mid ah dadka ugu caansan ee meelo kala duwan. In software ku jiraan diiwaanka badan oo la tarjumo luqadaha kala duwan iyo raacidda ee subtitles.
Gurmad Codsiga MFT. Software ayaa u saamaxaaya in ay soo saarto ama soo celin xogta of noocyo kala duwan iyo guuray files si ay kaadhka xusuusta.
Coco – aalad la isku weydaarsado qoraalka iyo fariimaha codka. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu ku xiriiro wada sheekaysiga kooxda isla markaana uu beddelo feylasha ama macluumaadka xiriirka.
Gmail – waa codsi aad kula shaqeyso emaylka adeega Google. Softiweerku wuxuu gacanta ku hayaa boostada oo leh akoonno badan oo ah qaabaynta shaqsiyadeed.